७ दिनमा कोरोना च्वाटै पार्ने आयुर्वेदिक औषधि बनाएको भन्दै यी युवा औषधि सहित मिडियामा ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
७ दिनमा कोरोना च्वाटै पार्ने आयुर्वेदिक औषधि बनाएको भन्दै यी युवा औषधि सहित मिडियामा ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
May 5, 2021 AdminLeaveaComment on ७ दिनमा कोरोना च्वाटै पार्ने आयुर्वेदिक औषधि बनाएको भन्दै यी युवा औषधि सहित मिडियामा ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
यसै बीच छुट्टै आयुर्वेदिक औषधि तयार पारेको भन्दै पुस्कर खतिवडा मिडियामा आएका छन । उनले आफ्नै अध्ययनमा विभिन्न जडिबुटीहरु मिलाएर आयुर्वेदिक औषधि तयार पारेर निशुल्क वितरण गर्दै आएका पनि छन । उनका अनुसार त्यो औषधि सेवन गरेपछि १४ दिनमा कोरोना निको हुने छ । उनले अहिले सम्म सैयौलाई उक्त औषधि दिएर निको पारेको दावी समेत गर्छन ।
यो पनि: पर्याप्त छैनन् अक्सिजन सिलिन्डर ! कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको जोखिम बढ्दै गइरहेका बेला तनहुँका अस्पतालहरुमा पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन सिलिन्डर नरहेको पाइएको छ । तनहुँमा कोभिडको उपचार गर्ने तीनवटा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा ६४ सिलिन्डर मात्र अक्सिजन मौज्दात रहेको पाइएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले दमौली अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न रु ७५ लाख विनियोजन गरे पनि अहिलेसम्म स्थापना हुन सकेको छैन । प्लान्ट स्थापनाका लागि टेन्डर आह्वान गरेर सम्झौता भइसके पनि काममा ढिलाइ भएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रदीपराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । यसै आर्थिक वर्षभित्रमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिसक्ने अधिकारीले बताउनुभयो । भिडियो हेर्नुहोस: